izixhobo zokuvavanya ukusebenza komthombo ovulekileyo ezili-10
Eyona Ukusebenza Izixhobo ezi-10 eziphezulu zokuVavanya ukuSebenza koMthombo
Izixhobo ezi-10 eziphezulu zokuVavanya ukuSebenza koMthombo
Ukuvavanywa kokusebenza kuya kuba yinxalenye yenkqubo yophuhliso, ke kubalulekile ukuba wazi ukuba zeziphi izixhobo ezikhoyo. Esi sithuba siqulathe uluhlu lwezixhobo zokuvavanya ukusebenza komthombo ezivulekileyo eziphezulu ze-10.
Izixhobo zoVavanyo lweNtsebenzo oluVulekileyo
Isicelo se-Apache JMeter sisoftware evulelekileyo. Sisicelo esicocekileyo seJava esenzelwe ukulayisha uvavanyo isicelo kunye nokulinganisa ukusebenza kwayo. Funda ngokugqithisileyo '
Ukuqengqeleka sisixhobo esinamandla kakhulu sokuvavanya umthwalo. Yenzelwe ukusebenziseka lula, ukugcinwa kunye nokusebenza okuphezulu. Funda ngokugqithisileyo '
Inkumbi sisixhobo ekulula ukusisebenzisa, esisasazwayo, sokuvavanya umthwalo womsebenzisi. Yenzelwe ukuvavanya umthwalo kwiwebhusayithi (okanye ezinye iinkqubo) kunye nokufumanisa ukuba bangaphi abasebenzisi abanokuthanani nenkqubo. Funda ngokugqithisileyo '
I-Tsung sisixhobo esivulekileyo semithombo emininzi yokuvavanywa komthwalo wokuvavanywa komthwalo. Ingasetyenziselwa ukuxinzelela i-HTTP, i-WebDAV, i-SOAP, i-PostgreSQL, i-MySQL, i-LDAP, i-MQTT, kunye neeseva zeJabber / XMPP. Funda ngokugqithisileyo '
Ukurhangqwa kuvavanyo lomthwalo we-HTTP kunye nokusetyenziswa kwebenchmarking. Ukurhangqwa kuxhasa ukungqinisisa okusisiseko, ii-cookies, ii-HTTP, ii-HTTPS kunye neenkqubo ze-FTP. Ivumela umsebenzisi wayo ukuba abethe iserver ngenani elinokuqwalaselwa labathengi abalingisiweyo. Funda ngokugqithisileyo '
IHttperf sisixhobo sokulinganisa ukusebenza kweseva yewebhu. Inika indawo ebhetyebhetye yokuvelisa umthwalo ohlukeneyo we-HTTP kunye nokulinganisa ukusebenza kweseva. Funda ngokugqithisileyo '
Nangona kunganxibanga ngokuthe ngqo kuvavanyo lwePerf, iTaurus ibonelela ngesakhelo esinohlobo oluzenzekelayo lovavanyo oluqhubekayo, kubandakanya ukusebenza kunye nokusebenza. Funda ngokugqithisileyo '
Artillery sisixhobo sanamhlanje, esinamandla nesilula ukusebenzisa uvavanyo lokulayisha kunye nesixhobo esisebenzayo sovavanyo lwezixhobo. Yisebenzise ukuhambisa usetyenziso olungenakulinganiswa oluhlala lusebenza kwaye lomelele phantsi komthwalo omkhulu. Funda ngokugqithisileyo '
IGoad isebenzisa ngokupheleleyo amandla eAmazon Lambas yokuvavanywa komthwalo. Ungasebenzisa i-goad ukumilisela imithwalo ye-HTTP ukusuka kwindawo ezine ze-AWS ngaxeshanye. I-lambda nganye inokuphatha amakhulu kunxibelelwano ngaxeshanye, akwazi ukufikelela kwimithwalo ephezulu yokufikelela 100,000 izicelo ezifanayo . Funda ngokugqithisileyo '
ab sisixhobo sokubeka umlinganiso we-Apache Hypertext Transfer Protocol (HTTP) yakho. Yenzelwe ukukunika umbono wendlela ufakelo lwangoku lwe-Apache olwenza ngayo. Funda ngokugqithisileyo '
isebenza kwi-oneplus 5t kwi-verizon
Uyikhuphela njani i-beta ye-iOS kawonke-wonke kwaye kamva wehlisele umva kwi-iOS 10.3
Ukungqubana kwezindlu kukhupha olona hlaziyo lukhulu ukusukela kwiClan Wars
Cela ukufikelela kwangoko ukuhambisa umxholo ukusuka kuGoogle Play Music uye kuYouTube Music
Ungayiseta njani i-Samsung Galaxy S5 njenge-Wi-Fi mobile hotspot (i-Android KitKat eneTouchWiz tutorial)